PlayStation 3 (PS3) waa Console kulanka video ah, kaas oo la soo hindiseen Sony Computer Entertainment. Waxaa ku xiga ee ay u Playstation 2, oo qeyb ka ah taxanaha PlayStation. Markii ugu horraysay waxa la sii daayay November 11, 2006, ee Japan. PS3 waa ka sii badan intii ciyaaraha Console fudud. Waxaa ka mid ah waxyaabaha kale oo dhan, PS3 aad u saamaxaaya in ay daawado filimada iyo videos qaabab file kala duwan. Sida design PS3 ciyaaraha video ay ku jiraan qaab ciyaareed sare hardware graphic oo kuu ogolaanaya in aad u ciyaaro aad video files ay ka mid yihiin 3D videos. Waxaad u baahan tahay oo kaliya 3D taageeray TV iyo muraayadaha indhaha.
Qeybta 1: PS3 ma Play MP4?
Qeybta 2: Waa maxay sababta aan My PS3 ciyaari karaa MP4?
Qeybta 3: Beddelaan MP4 in PS3 Video on Windows iyo Mac by Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate
Qeybta 4: Sida loo qulquli MP4 Video on PS3?
Su'aal Jawaabteeda tani ay tahay haa iyo maya, waxay ku xiran tahay qaabka MP4 faahfaahsan ka. Waxaan isku daynay in la doorto sababta ugu dhab ah u ma taageeraya files MP4 on PS3. Sida laga soo xigtay website saldhigga play taageero, PS3 taageeraya oo keliya files in MP4 oo go'an yihiin la H.264 / MPEG-4 AVC sare profile (LC AAC). Iyadoo ku MP4 gacanta kale waa design in weelka ay ku jiraan video oo la codec audio ama noocyo kala duwan oo videos. Haddii video MP4 aan la qorsheeyay la PS3 codec firadaha, markaas waa kiiska aan dhici doonaan gaaban si ay u sii qulquli MP4 in PS3 ama ma noqon doonto inaan awoodno in aan u ciyaaro files MP4 on PS3 xitaa haddii MP4 waxaa ku ool ah ku yimiday oo loo PS3.
PS3 si rasmi ah u taageeraan file MP4, laakiin weli waxaan ka arki karnaa kiiska badan oo user ma ciyaari karo file MP4 ay.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah su'aalaha caadi weydiiyay users oo kala duwan:
Q1: PS3 ma ciyaari qaar ka mid ah MP4 video files?
Q2: Waa maxay sababta aan awood uma yeelan in aan PS3 aqoonsan ama ciyaaro kasta video files ka ilo dibadda ah?
Q3: Waa maxay nooca video sameeya taageero PS3 ah? Inaan ka soo raynayo arrin careysan.
Jawaabaha su'aalo oo dhammu waa:
PS3 ciyaari karo MP4 video files laakiin waxay leeyihiin shuruud adag ee noocan ah ee qaab. Video waa encode la codec ee MPEG-4 AVC H.264 / Xvid / DivX iyo codec audio ee AAC.
Sida aan ognahay weli waxaa jira qaar ka mid ah codec MP4 videos kale oo loo isticmaali karaa in Deji video, faylasha sida waa aqlka PS3 sida MPEG-4 ASP.
Kordhinta ayaa ka mid ah labada files isku mid sida ".MP4" laakiin labada habab kala duwan encoded noqon lahaa.
Si by default PS3 play files MP4 laakiin kaliya la codec ka MPEG-4 AVC H.264 / Xvid / DivX iyo codec audio ee AAC. Kale MP4 video files yihiin aqlka sida MPEG-4 ASP.
Sidaas erayo fudud oo aan dhihi karaa, PS3 laga yaabaa .MP4 play (codec taageeray), ama laga yaabo in aysan (codec aqlka) ciyaari file MP4 ah.
Haddii aad ku xayiran yihiin la aqlka files ".MP4" (sida MPEG-4 ASP encoded) oo PS3 ciyaaro. Xalka ugu wanaagsan waa in aad loogu badalo aad file jira galay PS3 files MP4 habboon.
Waxa jira barnaamij kala duwan ee diinta videos. Laakiin bakaylahana ha cunina waxaan isticmaali Wondershare Video Converter Ultimate. Wondershare Video Converter Ultimate Waa run ahaantii si degdeg ah oo si sahlan loo isticmaali u badalo aad videos. Waxaa sidoo kale ka mid ah oo kala duwan pre-qeexaya qaab goob u Games, internetka, telefoonada gacanta iyo qalabka la qaadi karo iwm kuwee caawiyo si toos ah aad loogu badalo aad video abaal halkii isticmaalaya goob buuggan loogu talagalay qalab gaar ah sida PS3, Madaxweyne Siilaanyo ama PSP. Qalab kasta iyo madal ay leeyihiin codec gaar ah u gaar ah, kaas oo ay adag tahay in la xusuusto.
In qaybta soo socota waxaad ka arki kartaa sida ay u badalaan MP4 aqlka qaab MP4 PS3 ku qasabno yar iyadoo la isticmaalayo Wondershare Video Converter Ultimate. Talaabooyinka soo socda caawiyo inay ku tusaan sida loo badalo aad videos.
Tallaabada 1 darista files MP4 sida aqbasho
Jaantuska: 1 (Wondershare)
Ku rakib oo la furo "Wondershare Video Converter Ultimate" ee habka.
Marka ay muuqan fadlan hubi in aad ku sugan tahay Converter menu.
Markaas Riix "Add Files" icon (ama)
Waxaad si fudud "Jiid" iyo "rid" kartaa file galay software
Ka dib adiga oo riixaya "Add Files" la muuqday doono suuqa kala socda
Jaantuska: 2 (Wondershare)
Laga soo bilaabo aad "Browser" waxaad dooran kartaa file u MP4 aqlka iyo
Tallaabada 2 Calan qaab wax soo saarka aad
Jaantuska: 3 (Wondershare)
Ka dib markii ay doortaan aad file
Waxaad dooran kartaa qaabka wax soo saarka aad videos ah
Dooro "Qaabka Output"
Laga soo bilaabo dropdown menu, Riix "Device". Taas ka dib
Fadlan dooro "Game"
Oo waxaa ka Game Console dooro nooca ciyaarta (sida in PS3 kiiskan)
Tallaabada 3 badalo File
Jaantuska: 4 (Wondershare)
Ka dib markii ay doortaan qaab wax soo saarka aad hadda uun guji "Beddelaan" button.
By gujinaya folder Open waxaad ka heli doontaa faylka wax soo saarka ah.
File Output Tani waa si buuxda combatable la Console PS3 ah.
Waxaad si fudud u minguuriyaan file galay xasuusta la qaadi karo sida USB oo ciyaar fudud.
Waa adag tahay in la badalo aad files warbaahinta u ciyaaro on PS3. Sababta oo ah waxa uu u baahan yahay wax badan oo ka mid ah warbaahinta kaydinta iyo waqtiga loo baahan yahay tiro aad u badan oo ah data video. Sidaas ayay u fiican tahay hadii aan sii file ee PC oo sii qulquli dhex router wireless in PS3. DLNA / UPnP ayaa noqonaya smart inuu u ciyaaro warbaahinta ilaa iyo PC galay qalab il taageeray kasta.
Sidaas darteed haddii aad leedahay qadarka wayn xogta video, waxaad daawan kartaa weyn shaashadda TV aad PS3 ka PC isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate. Wondershare Video Converter Ultimate Jirsado aad PC galay Server Media ah.
Talaabooyinka soo socda idinku hanuunin ku saabsan "Sida loo sii qulquli aad videos on PS3"
Tallaabada 1 Connect PC iyo PS3 on isla network
Ka hor inta aan tago wixii faahfaahin dheeraad ah waxaa jira hal wax muhiim ah in aad waa in aad hubiso in aad PS3 iyo PC ku yaalaan shabakad isku sameeyaan, si Wondershare Video Converter toos ah lagu ogaan karaa qalabka aad.
Tallaabada 2 Daahfurka Wondershare Server Media
Jaantuska: 5 (Wondershare)
Halkan waxa aad ka bilaabi doonto "Wondershare Server Media" ka "bilowdo menu" hoos "Wondershare"
Waxa kale oo aad furi karaa "Wondershare Video Converter Ultimate" adigoo gujinaya "Server Media"
Jaantuska: 6 (Wondershare)
Tallaabada 3 dar files MP4 si aad u Server Media
Jaantuska: 7 (Wondershare)
Marka hore Riix "Import" iyo
Dooro file oo aad rabto in aad sii qulquli aad PS3
Hadda riix "Open" button
Halkan aad file la muuqday doono suuqa kala
Tallaabada 4 Start geeyo
Haddaba Screenshot soo socda ka "PS3" .
Ka dib markii ay tallaabo 3 hadda hubiyo PS3 oo heli Wondershare Video Converter Ultimate hoos "Video"
Waxaad dooran doonaa Wondershare Server Media
Jaantuska: 8 (PS3)
Shaashada kor ku xusan oo soo socda ka shaashadda TV si ay u muujiyaan fursadaha on PS3
Jaantuska: 9 (PS3)
Ka dib markii la doortay Server Wondershare Media, dooro folder meesha aad ku soo dhoofsadaan faylka
Waxaad dooran doonaa file
Hadda raaxaysatid videos sameeyaan aad PC aad u weyn shaashadda TV aan isku xira cable kasta.
Jaantuska: 10 (PS3)
Jaantuska: 11 (Wondershare) (Computer)
> Resource > MP4 > Ma PS3 Play MP4? Waa maxay Wrong?